के तपाइलाइ लामाे कपाल मन पर्छ ? यस्ता छन् कपाल लामाे बनाउने घरेलु उपाय - ज्ञानविज्ञान
कपाल बाक्लो र चम्किलो बनाउने घरेलु उपाए: प्याजको रसले यसरी बनाउनुहोस् लामो कपाल
प्याज निकै सजिलै पाइने खाद्य वस्तु हो । धेरैजसो मानिसहरु यसको तिखो गन्ध र काट्दा आँसु आउने भएकाले यसलाई रुचाउँदैनन् । तर प्याज कपालका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ ।
प्याजमा पाइने एन्टी–ब्याक्टेरियल गुणका कारण यसको रस कपालमा लगाउँदा कपाल झर्न रोकिने र टाउकोको संक्रमण आदिबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ ।
यो घरेलु उपायले कपाल चम्किलो र बलियो बनाउनका लागि निकै अद्भुत तरिकाले काम गर्दछ । यदि तपाईं पनि आफ्नो कपाललाई स्वस्थ, चम्किलो र लामो बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्याजको रसले बनाएको हेयर प्याकको प्रयोग गर्नुहोस् ।
अण्डा कपालको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा नै होला । लामो कपालको चाहना राख्नेहरुका लागि प्याज र अण्डाले बनेको हेयर प्याक निकै लाभकारी मानिन्छ । यो प्याकलाई बनाउनका लागि प्याजको रसमा अण्डाको सेतो भाग मिसाउनुहोस् । त्यसपछि यो प्याकलाई २०, ३० मिनेट आफ्नो भिजेको कपालमा लगाएर स्याम्पू लगाउनुहोस् ।
Don't Miss it के तपाइकाे अनुहार भन्दा हात कालाे छ ? यस्ता छन् अनुहार जस्तै हात पनि गाेराे बनाउने उपाय
Up Next आँखामा डार्क सर्कल आएर हैरान हुनुहुन्छ ? याे तरिका अनुसार काेलगेट लगाउनुहाेस्
हिंगको प्रयोगले औषधिको काम गर्छ
दाँत दुखेमा हींग खाँदा राहत मिल्छ । दुखाई भएको ठाउमा हींगको लेप लगाउदा दुखाई कम हुन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता…